26 Zvino mugore rechigumi nerimwe chete, pazuva rokutanga romwedzi, shoko raJehovha rakauya kwandiri, richiti: 2 “Mwanakomana womunhu, Tire+ zvarati kuJerusarema,+ ‘Tsvatu waro! Raputswa,+ iwo masuo emarudzi!+ Zvinhu zvava kuzouya kwandiri. Ndichazadzwa—iro raparara,’+ 3 naizvozvo zvanzi naChangamire Ishe Jehovha, ‘Tarira ndichakurwisa, haiwa iwe Tire, uye ndichaunza marudzi mazhinji kuti akurwise,+ sokuunza kunoita gungwa mafungu aro.+ 4 Vachaparadza masvingo eTire+ voputsa shongwe dzaro,+ ndichatsvaira guruva raro ribve pariri ndoita kuti riite sepamusoro poruware, panopenya. 5 Richava nzvimbo yokuomesera mambure+ okukukudzisa mugungwa.’+ “‘Nokuti ini ndazvitaura,’ ndizvo zvinotaura Changamire Ishe Jehovha, ‘uye richava chinhu chokuti marudzi apambe. 6 Mataundi ari pasi paro ari muruwa—achaparadzwa nebakatwa, uye vanhu vachaziva kuti ndini Jehovha.’+ 7 “Nokuti zvanzi naChangamire Ishe Jehovha, ‘Tarirai, ndichaunza Nebhukadrezari mambo weBhabhironi kuti arwise Tire achibva kuchamhembe,+ iye mambo wemadzimambo,+ aine mabhiza+ nengoro+ dzehondo nevarwi vakatasva mabhiza neungano,+ ivo vanhu vazhinji. 8 Achaparadza mataundi ari pasi pako ari muruwa nebakatwa, achagadzira rusvingo rwokuti akukombe narwo ogadzira rusvingo rwokukurwisa narwo+ uye achakusimudzira nhoo huru; 9 achaita kuti kugumura kunoitwa nechokugumurisa masvingo chake kunangidzirwe pamasvingo ako, uye achaputsa shongwe dzako, nemapakatwa ake. 10 Guruva remabhiza ake anoti nyandu nyandu richakufukidza.+ Masvingo ako achazununguka nokuda kwokutinhira kunokonzerwa nevarwi vakatasva mabhiza uye kunokonzerwa nemavhiri nengoro dzehondo, paanopinda nepamagedhi ako, sokupindwa kunoitwa muguta rinenge ravhurwa richiita zvokuputswa. 11 Achatsika-tsika migwagwa yako yose nemahwanda emabhiza ake.+ Achauraya vanhu vako nebakatwa, uye mbiru dzako dzesimba dzichawira pasi. 12 Vachatora pfuma+ yako nechisimba, vopamba zvinhu zvako zvokutengesa,+ voputsa masvingo ako, uye vachaputsa dzimba dzako dzakanaka. Matombo ako nematanda ako neguruva rako vachazviisa pakati pemvura.’ 13 “‘Ndichaita kuti ruzha rwokuimba kwako rugume,+ uye kurira kwoudimbwa hwako hakuzonzwikizve.+ 14 Ndichaita kuti uite sepamusoro poruware, panopenya.+ Uchava nzvimbo yokuomesera mambure okukukudzisa.+ Hauzombovakwizve; nokuti ini Jehovha ndazvitaura,’ ndizvo zvinotaura Changamire Ishe Jehovha.+ 15 “Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha kuTire, ‘Ko zvitsuwa hazvizozununguki here panonzwika kuparara kwako, panogomera munhu akuvadzwa zvokufa uye panourayiwa vanhu mukati mako?+ 16 Machinda ose omugungwa achaburuka pazvigaro zvawo zvoumambo,+ obvisa majasi awo asina maoko, uye achapfekenura nguo dzawo dzakamendwa. Achapfeka kudedera sezvinoitwa nguo. Achagara pasi,+ achadedera nguva dzose,+ oramba akakutarira achishamiswa. 17 Vachakuimbira rwiyo rwemariro,+ voti kwauri: “‘“Waparara sei, iwe waimbogarwa nevanobva kumakungwa,+ haiwa iwe guta rairumbidzwa, rakava nesimba mugungwa,+ iro nevaya vaigara mariri, vaya vaivhundutsa vagari vose vomunyika! 18 Zvino zvitsuwa zvichadedera pazuva rokuparara kwako. Zvitsuwa zviri mugungwa zvichanetseka nokuda kwokubviswa kwako.”’+ 19 “Nokuti zvanzi naChangamire Ishe Jehovha, ‘Pandichaita kuti uve guta rakaparadzwa, sezvakaita maguta asingagarwi, pandichaunza mvura yakadzika pamusoro pako, uye mvura zhinji paichange yakufukidza,+ 20 ndichakuburutsawo pamwe chete nevaya vanoburukira mugomba kuvanhu vekare kare,+ ndichaita kuti ugare munyika yakadzikira kwazvo,+ senzvimbo dzakaparadzwa kwenguva refu, pamwe chete nevaya vanoburukira mugomba,+ kuti urege kugarwa; uye ndichashongedza nyika yevapenyu.+ 21 “‘Ndichaita kuti uve zvinhu zvinongoerekana zvavhundutsa,+ uye hauzovipo; uchatsvakwa,+ asi hauzowanikizve nokusingagumi,’+ ndizvo zvinotaura Changamire Ishe Jehovha.”